Safiirka Somaliland ee Imaaraadka Carabta oo Khudbad Qiimo leh ka Jeediyey Xuska 28-guurada maalinta Qarannimada ee 18-May | Somaliland Post
Home News Safiirka Somaliland ee Imaaraadka Carabta oo Khudbad Qiimo leh ka Jeediyey Xuska...
Dubai (SLpost)- Safiirka cusub ee Somaliland u fadhiya dalka Imaaraadka Carabta Muniir Xaaji Cabdillaahi Abusite, ayaa ka qaybgalay Munaasibad lagu maamuusay 28-guurada ka soo wareegtay la soo noqoshadii Madax-bannaanida Jamhuuriyadda Somaliland ee 18-ka May oo dalka iyo dibedda-ba laga oogay shalay.
Munaasibaddaas oo lagu xusayey 28-guurada maalinta Qarannimada Somaliland ee 18-ka May, ayey soo qaban-qaabisay oo ay Jaaliyadda ku kulmisay Safaaradda Imaaraadka Carabta ee magaalada Dubai fadhigeedu yahay, waxaana ka qaybgalay Dadka reer Somaliland ee Imaaraadka iyo Wakiilka Wakaaladda Qurbo-joogta Somaliland.
Safiirka Somaliland u fadhiya Imaaraadka Ambassador Muniir Xaaji Cabdillaahi Abu-site, ayaa ugu horreyn Jaaliyadda la wadaagay Salaan uu uga siday Madaxweynaha iyo Madaxweyne Ku-xigeenka Qaranka, waxaanu sheegay inay tahay 18 May maalin ku suntan Qarannimada Somaliland, wuxuu tilmaama inay Somaliland tahay xiddig ka dhex-iftiimaysa Afrika, isla markaana uu rejaynayo inay Somaliland noqoto xuddunta dhaqaalaha geeska Afrika.
“Waxaa mahad iska leh Illaahay oo innagu sumay 28-guurada munaasibadda maalinta Qaran ee 18-ka May, oo ku suntan maalintii Jamhuuriyadda Somaliland dib ula soo noqotay madax-bannaanideeda, taasi oo aan hadyad lag innagu siin eek u timi halgan qadhaadh oo naf iyo maalba loo huray, ka dib 18-kii May 1991-kii timi.” Sidaa ayuu yidhi Safiir Muniir.
Safiir Muniir Abu-site oo hadalkiisa sii watay , waxa uu intaas ku ladhay oo yidhi; “Waxaa hubaal ah in 28-kaa sano ee ay jirtay Somaliland ahayd Xiddig iftiin badan oo geeska Afrika ka soo dhex-muuqatay, astaanna u ah dimuquraadiyadda, dhaqaalaha xorta ah, xorriyadda hadalka iyo nabadda.”
Waxa uu Safiirka Somaliland u fadhiya dalka Imaaraadka Carabta Muniir Abusite, waxa uu rejeeyey in Qarankani dalalka caalamka la aqoonsan yahay ka mid noqdo, waxaanu yidhi; “Waxaan Illaahay ka rejaynayaa in Somaliland noqoto xarunta dhaqaalaha ee geeska Afrika. Shacabka reer Somaliland ee Milgaha iyo maamuuska mudan ee Rag iyo Dumar, yar iyo waynba heegan ugu jira ee jecel horumarka iyo hana-qaadka Qaranka rabitaankooda ku dhisian, meelkasta oo ay daafaha dunida kaku nool yihiin iyo kuwa gudaha dalka ku sugan, waxaan leeyahay kaalintiinnii xuska maalinta Qaran lama illaawi karo. Sannadkan sannadkiisa barwaaqo, badhaadhe iyo Qarankeennan oo calankiisu ka dhex-muuqdo Qaramada Midoobay Allaah ha innagu simo.”
Sidoo kale, waxaa iyaguna halkaas ka hadlay Guddoomiyaha Wakaaladda Qurbo-joogta Somaliland Cabdi Cabdillaahi Xirsi (Dayax-weerar), Xildhibaan Maxamed Faarax Qabille oo ka tirsan Golaha Wakiillada Somaliland, Safiirkii hore ee Imaaraadka u fadhiyey Somaliland Xasan Hirad iyo Xubno kale oo magaca Jaaliyadda Imaaraadka ee Somaliland ku hadlayey, kuwaas oo hambalyeeyey Bulshada iyo Qaranka Somaliland guud ahaan, kana warramay maalintan Qaran ee 18-ka May iyo siday ku timi iyo qiimaha ay Ummadda reer Somaliland u leedahay, isla markaana ammaanay shaqada Safaaradda Somaliland ee Imaaraadka iyo Safiirkeeda cusub Muniir Abusite.
Munaasibadda 28-guurada gooni-isu-taagga iyo la soo noqoshadii Madax-bannaanida Somaliland ee 18-ka May 2019, ee lagu qabtay magaalada Dubai ee Imaaraadka Carabta sida ay u dhacday iyo hadallada laga jeediyey-ba, waxaannu idiinku soo gudbinaynaa Muuqaalkan hoose